Nutrition – Page5– Healthy Life Journal
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး ခံယူချိန်နဲ့ခံယူပြီးချိန်တွေမှာ ဘယ်လို အစာအာဟာရတွေကို စားပေးသင့်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ ။ အပင်တွေမှာပါတဲ့ ကွာလီဖီနောဆိုတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးကိုက ဓာတ်ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်တွေ...
မေး. အစားအသောက်အညွှန်းတွေမှာ GI၊ GL ဆိုပြီး ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါ ဘာတွေကို ဆိုလိုပါသလဲ။ နှင်းဝေ၊ မြောင်းမြ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. GI ရဲ့အရှည်က Glycemic Index...
အိပ်ရာမဝင်မီ ဘာစားသင့်သလဲ. . ဘာရှောင်သင့်သလဲ. .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ညဘက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျရင် သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက အိပ်ရာနိုးချိန်မှာ သင့်စိတ်ခံစားမှုကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ညည ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေဖို့ ဘယ်လို အစာတွေကိုစားသင့်ပြီး ဘယ်လို အစာတွေကို မစားသင့်ဘူးလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မစားသင့်သည့် အစာများ –...
မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါသည့် အစားအသောက်
မေး ။ မျက်စိကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို သိချင်ပါတယ်။ ကိုအောင်ကို၊ စမ်းချောင်း။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ မျက်စိကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေဖို့ အဓိက အရေးကြီးတာက ဗီတာမင်အေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေများများပါတဲ့ အစားအသောက်တွေဆိုရင်...
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ဘယ်အသက်အရွယ်တွေမှာ ဒူးနာတတ်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ ။ အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်၊ ၅၀ ထဲဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ လူအတော်များများဟာ ဒူးနာတဲ့ပြဿနာခံစားလာရတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ ဒူးနာတာဟာ ဒူးဆစ်ရောင်ရမ်းတာ၊ ရောဂါပိုးတွေဝင်တာ၊...
သွေးဖိအားကောင်းစေမည့် သဘာဝ အစာများ
ဥနီ(Beets)၊ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ တခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ နိုက်ထရိတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားတာကြောင့် သွေးကြောတွေကို ကျန်းမာစေပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းမွန်စေကာ သွေးတိုးကျစေပါတယ်။ နိုက်ထရိတ်ပါဝင်မှုများပြီး နှလုံးကျန်းမာစေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကတော့- – ဥနီ (Beets)၊ – ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ – တရုတ်နံနံပင်၊ –...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အသက် ၈၀ ကျော်အရွယ်ဆိုရင် တတိယအရွယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ အစားအသောက်က တော်တော်ကို နည်းသွားပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုနှုန်း (Metabolic Rate) ကလည်းနည်းသွားပြီ၊ ပြီးတော့ အာဟာရဓာတ်တွေကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းအားကလည်း နည်းသွားပါပြီ။ အစာကို ချေဖျက်နိုင်စွမ်းကလည်း...